I-chicken stew kunye nemifuno kunye nama-mushroom | Ukupheka kweKhitshi
I-chicken stew kunye nemifuno kunye nama-mushroom
Ngexesha lasebusika ukulungiselela iresiphi kubushushu obuphantsi luyolo. Ikhitshi liyatshisa, ligcwalisa ngevumba elimnandi kwaye liba yindawo efanelekileyo yokonwabela incwadi elungileyo kunye neglasi yewayini, awuvumi? Okungakumbi okanye kancinci yile nto yenzekileyo xa ndilungiselela le isityu senkukhu ngemifuno kunye nama-mushroom.
Inkukhu inokuphekwa ngeendlela ezininzi. Khange ndiyizame le ngaphambili, kodwa ndiqinisekile ukuba ndiza kuyiphinda. Isitshixo sikwi isiseko semifuno, ezisa ukunambitheka okuninzi kunye nokucoceka kwisitya. Ukuba awuyithandi enye, ungayifaka enye endaweni yayo, nangona ndiqinisekile ukuba awuyi kuyibona iyonke.
Esi sitya senkukhu simmered kunye nemifuno kunye nama-mushroom sisitya esihle sosapho lonke.
1kg. amathanga enkukhu (angenamsebenzi)
Ipinki yepepile emnyama entsha
Iispuni ze-2 zepaprika emnandi
Iipunipo ezi-2 zeoyile eseyintombi
4-5 amakhowa ngamaqhekeza
2 ikonofile, ityunyuziwe
Iikomityi ezi-2 zesipinatshi
400 g. Utamatisi osikiweyo
Iikomityi ezine zomhluzi wenkukhu (okanye amanzi)
50g. itshizi cream cream wabetha
1 icephe ye-Dijon lwemostade
I-parsley etyunyiweyo yokuhombisa
Kwisitya esixuba ityuwa, ipepile kunye nepunipoon yepaprika. Sisebenzisa umxube ukwenza Ixesha lenkukhu.
Kwipuphu ephantsi, fudumeza ioyile kubushushu obuphakathi kunye umdaka inkukhu 2-3 imizuzu kwicala ngalinye. Susa epanini kwaye ugcine.
Kwakuloo mbiza inye sibeka amakhowa nentwana yetyuwa. Saute de baphulukane namanzi kwaye baqale ukuba mdaka.
Ke yongeza ikonofile kunye nesipinatshi. Saute de isipinatshi sithambe.
Sidibanisa icephe lepeprika eseleyo kwaye uqhubeke upheka eminye imizuzu emi-2.
Songeza iitumato sika kwiityhubhu kwaye upheke de kube uninzi lwamanzi lube ngumphunga.
Kancinci kancinci siyigalela isuphu yenkukhu kwaye uzise kwimathumba. Emva koko sinciphisa ubushushu kwaye songeza itshizi cream. Siyivumele inyibilike kwaye inyibilike ngesosi.
Sahlula inkukhu kwisosi. Sigubungela kwaye simmer imizuzu eli-15, de ibe inkukhu iphekwe ngokupheleleyo.
Sisusa isiciko kwaye sonyusa ubushushu ukuya kubukhulu obuphakathi. Songeza i-mustard ye-Dijon kwaye upheke de isosi ibe nokungaguquguquki okufunwayo.
Sihombisa neparsley kwaye sikhonza sishushu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Izitya » Izitofu kunye neesobho zokupheka » I-chicken stew kunye nemifuno kunye nama-mushroom
I-omelette yeetapile ephekiweyo
I-salmon yokutshaya kunye ne-pizza ye-arugula